トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ahoana ny mahita amin'ny fotoana mafana indrindra ny pachinko trano izy
Ary na Fiozao ara-potoana mafana ianao fa tena fotoana, dia mety ho re tsara. Matevina Fiozao ara-potoana, arakaraka ny toerana misy ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny toerana sy ny miasa sata sy ny varotra, ho avy ny sasany dia avy ny fahasamihafana tanteraka. Ao, satria mihevitra aho fa tsy matevina Fiozao ara-potoana no tsy mahalala, eto isika dia hampiditra ny ankapobeny pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny aizim-Fiozao ara-potoana.
matevina ny Fiozao ara-potoana, izany hoe, pachinko parlors ho amin'ny Fiozao ara-potoana izay te-hampitombo ny fandidiana. 'S ny fanantenana Fiozao ara-potoana ho avy ny tsara indrindra mpanjifa. Noho izany, amin'izao andro izao faritra, dia mety ho tonga zavatra nambolena tao an-trano izy pachinko lafiny. Ohatra, jereo tsara ny no fotoana maha samy hafa ny amin'ny misokatra. Amin'ny toe-javatra sasany ihany no
1 modely, mba hanakanana ny plurality ny modely, dia misy ihany koa ny raharaha mba hovohana ny fotoana maha samy hafa. Ary ny toy nisokatra 13 ora sy 18 ora misokatra modely, heveriko fa ny olona sasany izay efa nahita dia nanambara ny. Zava-misy fa manana fotoana hafa misokatra, dia tianao mihazakazaka tamin'izany andro izany. Ary, ao amin'ny modely izay lasa lasibatry ny fotoana samy hafa misokatra, na Horukon haavony fametrahana fiara vitsy dia hatao amin'ny ankapobeny, isika, na miezaka hanokatra noho ny mahazatra fantsika fanitsiana.
milalao ihany koa ny maha samy hafa ny fotoana, hitily misokatra, Heveriko fa fomba tsara handresy.
Ankoatra izany, raha tsy izany no maha samy hafa ny fotoana misokatra, ny fomba miteny Fiozao ara-potoana, na dia ny mafana ny, ora hariva be avy amin'ny tokony ho 3:00 tolakandro 5 na 6, ary ny aizim-Fiozao ara-potoana amin'ny an-tampon'ny tanjona faha- Na dia. Amin'izay Fiozao ara-potoana, ka ataovy hoe: Nahoana no matevina ny Fiozao ara-potoana, ny olona izay tonga Tomokazu hoe, ianao efa nanao ny fampiasam-bola amin'ny lafiny sasany.
Ankoatra izany, ny teo aloha ny angon-drakitra andro, satria ny angon-drakitra ny ora vitsivitsy ny andro azo hita, noho ny mankanesa any Tomokazu, efa mitsangana eo fa azo inoana kokoa ny misafidy. Raha ahy mikendry ny sehatra dia narrowed izy, noho ny voa avy any an-jambany ny latabatra rehetra, dia ho mahasoa.
maodely ankehitriny misy izay fitaovana amin'ny endri-javatra antsoina hoe latency mety fiovaovana. Amin'ny alalan'ny ny toeram-pivarotana, fa tsy azo inoana famaf?na ny miseho fiovaovana, dia izy ireo ihany koa fa efa nentina ho any amin'ny ampitso. toy izany Pati Raha mahita Nko tsena, dia mety hilaza fa Tomokazu matevina Fiozao ara-potoana ihany koa.
na izany aza, mba hahitana izany latency mety fiovaovana, Izaho koa tahaka Miyabureru ny latency, satria tsy maintsy mahatsiaro ny ampahany, fa ianareo kosa mila mianatra kely, nefa, raha mahita an'i Tomokazu, teny mety fiovaovana ao amin'ny anatiny satria ny fandikan-teny izay ianao, dia ho efa vita tamin'ny kely ny fampiasam-bola ho amin'ny hanatona ny hira. Raha io fotoana io fe-potoana, fa toy ny mety ho nandao avo, fa tsy ny Fiozao ara-potoana izay afaka hanamafy ny tena zava-misy.
pachinko milina, satria ny ROM no mitantana, raha tsy manana fanaraha-maso lavitra, dia satria tsy azo atao ny fivarotana ny lafiny fitaovana. Na izany aza, arakaraka ny zava-nitranga tamin'ny Fiozao ara-potoana sy ny lafiny fivarotana izay natsangana tany aloha, dia mikendry zavamaniry dia efa be narrowed teo. Event ny fotoana, sy ny toeram-pivarotana toy ny tsirairay ihany koa eo amin'ny boky, miezaha mikendry ny Fiozao ara-potoana fa mety ho fampiasam-bola mahomby.